IHALALISELWE NXA ZONKE I-RADIO KHWEZI IGUBHA ENGU-25 ISEMOYENI – Sivubela intuthuko Newspaper
IHALALISELWE NXA ZONKE I-RADIO KHWEZI IGUBHA ENGU-25 ISEMOYENI
UMNU Phakamani Mkhwanazi osophikweni lwezokuthengisa nezokuxhumana eRadio Khwezi noMnu Daniel Wunderich ongumphathisiteshi.
KUTUSWE iqhaza labasakazi beRadio Khwezi abalibambe ekulapheni ngokukamoya imiphefumulo yabantu baKwaZulu-Natal selokhu lo msakazo waba semoyeni iminyaka engu-25 emuva kokusungulwa nguMfu Erlo Stegen oyingqalabutho yaKwaSizabantu Mission.
Abaphathi beRadio Khwezi esakaza ku-90.7-107.7 FM mhlaka 2 September bebenze indumezulu yomcimbi wokugubha le minyaka umsakazo usemoyeni ekomkhulu lawo elisemishini yakhona KwaSizabantu eKranskop.
Ekhulumela isiteshi uMnu Daniel Wunderich ongumphathi uthe miningi imisakazo esungulwayo kodwa iphelele endleleni kodwa iKhwezi lilokhu libe yinkanyezi yokusa kubantu. Ubonge lo msakazo ngokudlulisa ezikamoya kubantu ababuthaka asebegcine bemndeni munye nalo msakazo. “Namhlanje sibonga abalaleli beKhwezi abalokhu behambe nathi yonke le minyaka kuhlanganisa nethimba likaMasibumbane. Uma ngibuka izinguquko ezenzekile ekukhuliseni iKhwezi ngingekhohlwe ukubonga iKwaSizabantu Mission ngaphansi kobuholi bukaMfu Stegen owaba nombono ngalo msakazo njengoba elokhu eseseke njalo esikhulekela kulo msebenzi kaNkulunkulu. Ngibonga nani basakazi beKhwezi ngokuzikhandla ngokwakha ubungani nabalaleli bomsakazo lokho osekwenze naba mndeni munye nabo,” usho kanje.
UMnu Michael Ngubane oyiphini lomphathisiteshi ubonge ubufakazi babantu abaphulukiswe yiRadio Khwezi abese belahle ithemba ngempilo. “Kunomunye umlaleli owasuka eNewcastle ezobonga lapha esiteshini ngoba wayesenqume ukuthatha impilo yakhe eseyozibulala. Uma efika la emsakazweni lo mlaleli wathi wayesehlele kahle ngokuthi uyazibulala eseyiphethe intambo yokuzikhunga kodwa ngenxa yokuthi wayekwenza lokho evule iRadio Khwezi kwaba sengathi umsakazi owayengemva kombhobho uyambona ukuthi ufuna ukwenzani wamkhuza. Lowo mlaleli wamukela iVangeli likaNkulunkulu ngenxa yeRadio Khwezi wasinda nasekufeni,” kusho uMnu Ngubane.
UMfu Bongani Zondi ukhumbule la bephuma khona kwakuqalwa iRadio Khwezi ethi beqala ukusakaza kulesi siteshi izinhlelo eziningi zazisaqoshwa kusukela kwelezingane iSakh’ ithempeli. Ubongele nemiphefumulo esisindile nokwakheka kwemizi eminingi ebisibhidlika kodwa ngokuvela kwenkanyezi yokusa iRadio Khwezi yaphila.
USIXOXA NGENCWADI ISIPHO SENDODANA AYIBELETHELE EJELE
BAGCWALE IRENKE BELWISANA NOKUHLUNYEZWA KWABESIBHUDA